laacib » DEG-DEG: Alisher Usmanov Oo Lacag 1.3 Bilyan Dollar Ah Ku Dalbaday In Saamiga Arsenal Uu Kagala Wareego Ninka Saamiga Ugu Badan Ee Stan Kroenke.
Bilyaneerka dalka Ruushka u dhashay ee Alisher Usmanov oo ka mid ah dadka saamiga aan waynayn ku leh laacibkii Arsenal ayaa dalab 1.3 bilyan dollar ah miiska u saaray ninka saamiga ugu badan Arsenal ku leh ee Stan Kroenke si uu u noqodo saamilaha ugu badan ee laacibkii Gunners. Alisher Usmanov ayaa ka mid ah dadka sida wayn u dhaliilsan Stan Kroenke wuxuuna doonayaa in uu la wareego maamulka laacibkii Gunners.
Alisher Usmanov ayaa boqolkiiba 30% ku leh saamiga laacibkii Arsenal wuxuuna hore u dalbaday in sarre uu u qaado lahaasha laacibkii si uu maamulkeeda wax wayn uga badali karo laakiin Alisher Usmanov ayaa waqtiyadii la soo dhaafay laga diiday dalab uu ku doonayay in uu sarre ugu qaado saamigiisa Gunners.
Wargayska Financial Times ayaa hadda shaaca ka qaaday in bilyaneerkan ree Russia ee Alisher Usmanov uu dalab 1.3 bilyan dollar ah oo u dhiganta 1 bilyan gini uu ku doonayo in uu kula wareego lahaanshaha Stan Kroenke kaas oo ay shirkadiisa Kroenke Sports & Entertainment ay leedahay boqolkiiba 67% saamiga ah laacibkii Arsenal.
Laakiin wararka ayaa sheegaya in Stan Kroenke aanu doonayn in uu iska iibiyo saamiga wayn ee uu ku maamulo laacibkii Arsnenal. Stan Kroenke ayaa eedayn wayn kula kulmaya hubanti la’aanta mustaqbqlka Arsene Wenger iyo xidigaha muhiimka ah ee Alexis Sanchez, Mesut Ozil iyo xidigha kale ee ay heshiiyadoodu dhacayaan.